Dhaamsa Waggaa Haaraa ABO | gadaaoromia
Posted on December 31, 2012 by freeoromo
Dhaamsa Waggaa Haaraa ABO	The following is a joint New Year’s message from OLF-QC and OLF-Shanee.
Dhaamsa Waggaa Haaraa ABO
Miseensota ABO kaayyoo keessanitti cichuun QBO keessatti qooda lammummaa gumaachaa jirtan; Waraana Bilisummaa Oromoo haala ulfaataa jalatti diina kuffisaa kufaa jirtu;
Dargaggootaa Oromoo, sodaan alatti diina dhala namaaf naasuu hin qabne irratti finciluun mirga ummata keessaniif falmaa jirtan;
Kabajamaa Ummata Oromoo, sababa bittaa alagaan jireenya gadoo fi hadhaawaa keessatti argamtu; Akkasumas deggertootaa fi firoottan QBO;
Baga waggaa haaraa 2013 geessan jechuun ABOn dhaamsa isaa isiniif dhiheessa. Waggaan haaraa kunis bara ummatni Oromoo waanjoo gabrummaa jalaa bahee bilisummaa isaa itti gonfatuuf, bara diinni ummatootaa itti jilbeenfatee mirgi ummatoota cunqurfamoo itti waaru akka tahu hawwii isa ibsa.
Yeroo hunda waggaan haaraa wayta seenu waggaa dabre keessa kan raawwatame deebi’anii ilaaluu dhaan milkiilee argaman, gufuulee fi rakkoolee mudatan gamaaggamuun irra caalaa hojjatuuf of qopheessuufi. Bara 2012 keessa mooraan QBO maal fakkaataa ture? haalli ummata Oromoo hoo? Haalli impaayera Itophiyaa fi diinaa maal fakkaata ture? jedhanii kan dabre keesa deebi’anii ilaaluun waggaa haaraa keessa kan hojjatamuu qabu irratti hammilee fi murannoon itti seenuu fi gufuulee nu mudatan jabinaan dura dhaabbatuu fi irratti qabsaa’uuf gargaara.
Ummatni Oromoo kiyyoo kolonii Itophiyaa jalatti kufuu irraa mootummoota Itophiyaa darabeen isa bitaniin miidhaan dorgomaa hin qabnee fi hacuccaan dhala namaaf hin malle irra gaheera. Mootummootni irratti wal jijjiiran maqaa fi bifa jijjiirratanillee galiin isaanii tokkicha waan taheef gabrummaa itti jabeessaa dhufan malee irraa hin laaffisne. Sirni nugusummaa, soshaalizmiis tahe dimokraasii kan ittiin bittootni of golganii saaminsaa fi cunqursaa isaanii tarkaanfachiisan tahe malee ummata Oromoof faaydaan argamsiise homaatuu hin jiru. Keessattuu bara mootummaa Wayyaanee/IHADG ummatni Oromoo yeroo kamiyyuu caalaatti diina moggaafamee duula bifa gara garaa irratti geggeeffamaa jiruun jireenya du’aan olii jiraan gadii keessatti argama. Kana mirkaneessuuf ummatni Oromoo akkamitti akka jiraataa fi haala irra geessifamaa jiru ilaaluu qofti gahaa dha.
Har’a ummatni Ormoo biyya isaa irratti qee’ee isaa irraa humnaan buqqifamuun lafa dhablee taasifamaa jira. Maqaa misoomaa fi guddina shaffisaa argamsiifna jedhuun qotee bulaan Oromoo lafa isaa irraa buqqaafamuu fi ari’amu lakkoobsi isaa dabalaa jira. Addatti ammoo Oromootni andaara magaalaa gurguddoo fi daandiitti dhihoo jiraataan beenyaan alatti manni irratti diigamee ari’amaa jiran. Kana irraa Oromiyaa keessatti kan badhaadhaa jiran alagoota alaa dhufanii fi Wayyaanota aangoo of harkaa qabani dha. Oromiyaan bakka abbaan biyyaa itti hagabuu fi hiyyoomu alagaan keessatti duroomu taateetti.
Murna hawaasa Oromoo keessaa mootummaan Wayyaanee/IHADG addatti dargaggo Oromoo irratti xiyyeeffatuun kanneen tattaafata heedduun barnoota ol aanaa dhaqqaban barnoota irraa ari’aa, maqaa goolessummaan hidhaa, kanneen baratan ammoo jalee fi deggeraa sirnichaa hanga hin taanetti dalagaa akka hin arganne gochaa fi biyyaa akka dheessan taasisuun dabni ol aanaa raawwatu waggaa dabarsine keessa kan bal’inaan mul’ate dha. Dhalataan Oromoo baratee jireenya irra wayyaa akka hin jiraanne taasisuuf barnoota wayyaa waraana keessatti argattu jedhee gowwoomsuun lola isaa lolsiifataa fi waardiyyaa godhatuun jireenya hammaataa jalatti gammoojjiitti dhamaasa. Diinni dargaggoo Oromoo irratti xiyyeeffatee hidhaa, ajjeechaa, ukkaamsuu, arihatamuu fi rakkoolee adda addaa irraan gahu illee dargaggoon osoo hin jilbeenfanne wal gurmeessuu dhaan diddaan agarsiisaa jiru kan diina muddamsuu keessa seensisaa jiruu fi bilisummaan ummata Oromoo kan hin hafne tahuu mirkaneesse dalagaa boonsaa dargaggoo Oromoon waggaa dabre keessa hojjatame dha. Dhaadannoolee: Gabrummaan haa gahu!, Mirgi ummata Oromoo haa kabajamu! Alagaan bulfamuun as irratti haa dhaabbatu! Qabsaawaan ni kufa Qabsoon iti Fufaa! jechuun FDG bara 2012 keessa Qeerroon Oromoo adeemsise Oromiyaa waliin gaheera. Fincilli diddaa gabrummaa Qeerroo Oromoon adeemsifamaa jiru kunis hanga cunqursaa fi saaminsi ummata Oromoo irraa hin hafnetti kan itti fufu tahuu ABOn hin shakku.
Mootummootni Itophiyaa hundi amantiin golgamuu fi itti fayyadamuun bittaa isaanii dheereffatuuf itti gargaaramaa kan turan tahuun falamsiisaa hin tahu. Amantii tokko kan mootummaa taasisuun kaan moggeessuun tooftaa isaa beekamaa dha. Caasaa amantii keessa harka naqatuun matootii amantii ofiif fedhan irratti muudaa itti fayyadaman. Karaa biraan amantii qaphxii garaagarummaa taasisuun ummatoota wal irraa fageessuun bittaa isaaniif haala aanjeessan. Mootummaan Wayyaanee dimokraatawaa tahuu isaa guyyuu lallabatu matootii amantii dhuunfatee itti fayyadamuutti dabalee amantii hordofanii fi mirga amantii qaban kabajsiifachuuf gaafaatuu qofaan amantoota ajjeesuu, saamuu fi hidhuudhaan mootummoota Itophiyaa isa dura turan kan caale tahee argama.
Itophiyaa keessaa har’a kan baqataa hin jirre Wayyaanotaa fi kanneen ummata isaanii dagatuudhaan dantaa dhuunfaa isaaniif dursa kennan qofa. Kana irraa biyyoota lammiiwwan biyyaa cunqursaa, saaminsaa fi roorroo baqa biyyoota ollaatti baqatan keessaa Itophiyaan isii duraa ti. Mootummaa Wayyaanee dhaloota biyyaa akka baqatan taasisee bakka baqatanittis akka nagaa hin argannee taasisuu dhaan mootummoota biroo irraa addummaa qaba. Mootummaan Wayyaanee baqqattoota Itophiyaa walii gala addatti ammoo baqataa Oromoo irratti xiyyeeffatuun qondaalota mootummoota biyyoota ollaa garitti gargaaramee Oromoota hedduu ukkaamsuu fi ukkaamsisuun biyyatti deebiseera. Seera addunyaa cabsuun daangaa biyya ollaa keessa seenee kan inni ajjeesee fi ajjeesise lakkoobsaan hedduu dha. Kun hundi Oromoo irra kan geessifamuuf mirga isaaf falmatuu fi sirna abbaa irreef tole jedhee buluu diduu isaati irraa ti.
Waggaa xumurame keessa sirna cunqursaatti mataa tahuun waggoota 20 oliif abbaa irrummaan empayerittii dursaa kan ture dhabamullee kanneen sirna kanan leenjifamanii qopheeffamanii fi jaleewwan sirnichaa sirna farra ummatootaa kana itti fufsiisuuf kakuu isaanii haaromsuun, tuffii ummatootaaf qaban kan agarsiisu tahuutti dabalee, mirga ummatootaa ukkaamsaa jiratuun kaayyoo Wayyaanee tahuu mirkaneesse. Haalli yeroo dhihoo as mul’ate sirnichaa fi Wayyaanee kan laaffisee tahee argana. Kanneen aangoo biyyattii dhaalan mirga ummatootaa kabajuu fi kabajsiisuu irraa dantaa kan hin qabne tahuu qofa osoo hin taane kanneen isaan jala hiriiruun mirga ummataa kabajsiisna jedhanii abjootan osoo hin hafiin Wayyaanee jalatti mirga ummatootaa kabajsiisuun kan hin danda’amne tahuu waggaan darbe haala hin shakkisiisneen dhugoomseera. Kanneen jalummaan hiriiranis tahan karaa nagaa qabsoofna jedhan hundi moggeeffamanii aangoo furtuu irraa fageeffamuu fi yakka hin raawwatneen hidhaa waggaa dheeraa itti murteessuun waltajjii siyaasaa irraa fageeffaman. Kunis Wayyaanee jalatti mirgi ummatootaa kabajamuu fi sirni dimokraasii dhugoomuun kan hin yaadamne tahuu agarsiise.
ABOn bu’ureeffamuu irraa eegalee walabummaa Oromiyaa fi bilisummaa ummata Oromoo mirkaneessuuf qabsoo siyaasaa fi hidhannoo kan raggaafate amalaa fi aadaa siyaasaa bittoota Itopiyaa irraa ka’uun ture. Har’as taanaan ABOn tooftaa fi tarsiimoo QBO ittiin geggeessu kana irraa osoo hin goriin falmaa diina irratti adeemsisaa jiruun waggaa dabarsine keessa injifannoolee hin tuffatamne diina irratti galmeessee jira. Har’a golee Oromiyaa mara, magaalaa fi baadiyyaa hundatti, WBO diinaa fi lukkeelee diinaa irratti tarkaanfii fudhachuu irratti argama. ABOn akka diinni hawwutti kan dhabamsiifamu osoo hin taane kan guddataa fi kaayyoon isaa deggersa ummataan jabaataa fi babal’ataa deemu tahuu waggaan dabarsine haala hin mamsiifneen mirkaneessa.
Waggaa dabre keessa ummatni Oromoo bilisummaa fi walabummaaf wareegama barbaachisu kafaluuf qophii tahuu kan itti mirkaneesse, jaalalaa fi deggersa dhaaba isaa ABOf qabu caalaatti itti mul’ise, deggersaa fi tumsa WBOf godhu itti guddisee dha. Tarkaanfiin harqoota gabrummaa of irraa buusuuf ummata keenyaan fudhatamaa ture kunis kan qabsaawotaa fi firoottan qabsoo gammachiise, diina ummata Oromoo mataa gadi qabachiise dha.
Diddaan gosa adda addaa, fincilootni fi tarkaanfiileen fudhataman guyyaa bilisummaa ummata Oromoo dhiheessu, dhabama diinaa jarjarsaa jira. Qabsoon bilisummaa ummata Oromoo hanga fiixa bahutti qabsoon bilisummaa kan hin dhaamne tahuu dalagaan dhugoomeera. ABOn murannoo ummata keenyaa kana dinqisiifataa QBO caalaatti jabeessuu fi finiinsuuf kan hojjatu tahuu irra deebi’ee mirkaneessa.
Yeroo ammaa kana hubannoon ummata keenyaa sadarkaa amansiisaa irra gahee jira. Walabummaan biyyaa fi bilisummaan ummataa hawwamu wareegama kan gaafatu tahuu, qabsoo finiinsuun alatti falli ittiin diina of irraa kaasan kan biraa akka hin jirre caalaatti hubateera. Kun kan abdachiisuu fi QBO fuula dura furgaasu tahuun amantaa ABO ti. Waan taheef milkiilee hanga ammaatti qabsoon argaman jabeeffataa kanneen hafan guuttatuuf bara 2013 jabaannee sosso’uun dirqama lammii hundaa tahuu ABOn yaadachiisa.
Qabsoo bilisummaa ummata tokkoo kan injifannoon gahu ummaticha abbaa dhimmaa qofa. Alagaan bilisummaa ummataaf argamsisuu fi diinni mirga ummataa fedhiin kennus hin jiru. Kanaaf hawwii keenyatti firii gochuuf hadhaa qabsoo waliin unatuu fi dantaa ummata ofiif bakkayyutti falmuun akkaan barbaachisaa dha. Fiixa bahiinsa akeeka keenyaaf kaayyoo kaaneef irratti cichuun aarsaa barbaachisu waliin baasaa waggaa haaraa kana keessa injifannoo cululuqaa galmeessuuf waliin haa kaanu.
Ummatni Oromoo yeroo ammaa kana duula saaminsaa itti banameen lafaa fi qe’ee isaa irraa buqqaafamaa tooftaa adda addaan alagaa biyya isaa irra baayyinaan qubachiisuun minority taasisuuf tattaafatamaa jira. Addatti ammoo diinni demography magaalaalee Oromiyaa jijjiiruuf bal’inaan irratti bobba’ee argama. Kanaaf gabrummaa bifa haaraa ummata Oromoo irratti hidda yaafataa jiru kana ciruudhaaf ummatni Oromoo shira diinaa kana hubbatee gurmuu isaa jabeeffatuun qabsoo isaa finiinsuun daandii filmaata biraa hin qabne tahuu ABOn irra deebi’ee yaadachiisuu fedha.
Bara 2012 keessa sochiin Qeerroon Oromoo finiinsaa ture sagalee ummata Oromoo dhageessisuu fi miidhaa irra gahaa jiru hubachiisuu keessatti qoodni gumaache ol aaanaa dha. Ummata akeeka tokko jalatti diina tokkicha irratti hiriirsuuf hojiin Qeerroon hojjatame kan nama jajjabeessuu fi firii horataa jiru dha. Kanaaf miseensotni ABO bakka jiran hundaa, deggertootnii fi ummatni Oromoo bal’aan sochii ilmaanii fi obboleeyyan keessan itti jiran kana karaa isiniif danda’ame hundaan akka jabeessitan dhaamaa; ABOn gama isaatiin sochii Qeerroon itti jiru caalaatti jabeessuuf kan irraa eegamu kan gumaachu tahuu mirkaneessa.
Waggaa dhumate keessa WBO haala rakkisaa jalatti tarkaanfii diina irratti fudhateen gaachanaa fi abdii ummata Oromoo tahuu caalaatti mirkaneesseera. Bara haaraa kana keessaa ammoo tarkaanfii isaa dachaa dachaan guddisuuf dirqama addaa isa eeggatu dha. WBO waadaa ummataa fi dhaaba isaaf seene kabajuun dirqama isaa bakkaan gahuuf ammoo deggersii fi tumsi ummataa barbaachisaa tahuun falamsiisaa miti. Waan taheef ummatni Oromoo ilmaan isaa falmaa hadhaawaatti jiran kanneeniif humna, qabeenyaa fi dandeettiin utubuun dirqama lammummaa Oromoo hundaa waan taheef gaafatama nurra jiru kana waggaa haaraa keessa gahummaan bahatuuf murannoon haa kaanu.
Mootummaan abbaa irree umrii bittaa isaa dheereffatuuf ummata tokkicha bifa adda addaan qooda. Ummatootni ollaa nagaan akka gidduu isaanii hin jiraanneef isa tokko kaan irratti kakaasuun akka wal shakkanii fi wal sodaatan taasisee hariiroo gidduu isaanii booressuun bittaa isaa jireessuun tooftaalee gabroofataan itti fayyadamu keessaa isa tokko. Kanaaf shira waggoota 20 oliif irratti hojjatamaa ture kana irra aanuuf bara 2013 keessa ummatni Oromoo tokkummaa isaa cimsee sosso‘uun irraa eegama. Ummatoota ollaa isaa waliinis hariiroo ijaaraa argamsiisuuf tattaafatuun dalagaa waggaa haaraa keessa irratti bobba’uu qabu dha. Shirri Wayyaanee addaan qoodanii bituu fashalee tokkummaan ummata keenyaa caalaatti akka jabaatuu fi hariiroon ummatoota cunqurfamoo waliinii cimee diina waloo irratti fuulleffatuun akka danda’amuuf ABOn kan isa irraa eegamu hunda raawwatuuf boodatti hin deebi’u.
Mootummaa Wayyaane sirna abbaa irrummaa diriirsuun empayera Itophiyaa waggoota 20 oliif akka bitu kan dandeessisee fi ummatoota irratti aangomsuun jireesse tumsa diplomasii fi gargaarsa maallaqa irra guddaa biyyoota Dhihaa irraa arjoomame dha. Kun akka gu’u ykn xiqqaatu taasisuun dirqama waggaa haaraa kana keessa itti bobba’amuu qabu keessaa tokko. Waan taheef miseensotni dhaabaa biyyoota alaa adda addaa keessa jiraattan hundi kana milkeessuuf sochii keessan jabeessitanii akka itti fuftan ABOn dhaama. Kanatti dabalee roorroo baqataa Oromoo irra gahaa jiru dhageesisuuf caalaatti akka hojjatan hubachiisa.
Jeequmsa mooraa qabsoo bilisummaa keessatti uumaneen qabsaawotni wal afaan galagalanii qabsoon bilisummaa miidhamuun hin haalamu. Qoodaminsi uumamuun gurmuu qabsaawotaa laaffisee diinaa fi farreeniif hiree kennuu yoo tahe malee qabsaawotaafis tahe ummataaf bu’aan argamsiisu hin jiru. Haala kana yoom illee caalaatti hubachuun ABO ShGn geeggeefamuu fi ABO QCn geggeeffamu waan addaan isaan fageessu walgidduu dhaa haxaawuun tarkaanfiilee jajjaboo gara tokkummaatti dhiheesu fudhannee ibsa kanas walumaan maqaa ABO tokkichaan yammuu isiniif dabarsinu gammachuu ol’aanaan nutti dhagahamuu ibsina.Takaanfii ABO deebisanii dhinsuu kana bakka jirtan maraa gammchunn simachuun keessan nu jajjabeesseera. Hojii eebbifamaa jalqabame kana fixannee Dhaaba tokkicha tahuun diina keenya irratti fuula deeffachuuf of qusannoo malee gamtaan kan hojjetamu tahuu irra deebinee ummata keenyaaf mirkaneessina. Akkuma hanga yoonaa gootan miseensoni Dhaabaa fi ummatni keenya dammaqaan akka hojjettan ergaa dabarsina. Tarkaanfiin miseensotaa fi murnoota ABO akeekaa fi kaayyoo wal fakkaataa qaban wajjin Dhaaba keenya jalatti dachaanee tokkummaan waliin hojjechuuf fedhii keenya irra deebinaa addeessina.
ABOn alattis kanneen walabummaan ijaaramanii bilisummaa Oromoof falman hunda wajjin harka wal qabannee qabsaawuu hang tokkoomuutti waliin hojjechuuf fedhiin guutuun jiraachuu irra deebinee ibsina. Ummatoota ollaa isaa waliinis hariiroo ijaaraa hanga ammaa ture jajjabeessuuf hojjatuun dalagaa waggaa haaraa keessa irratti bobba’uu qabnu dha. Shirri Wayyaanee addaan qoodanii bituu fashalee tokkummaan ummata keenyaa caalaatti akka jabaatuu fi hariiroon ummatoota cunqurfamoo waliinii cimee diina waloo irratti fuulleffatuun akka danda’amuuf ABOn kan isa irraa eegamu hunda raawwatuuf boodatti hin deebi’u.
Mootummaan Wayyaanee kan hanga har’aa jiraate deggersa maallaqaa fi tumsa diplomaasii mootummootaa irraa argatuun akka tahe ni beekama. Kanaaf ABOn ammas irra deebi’ee gargaarsi Wayyaaneef godhamu ummatoota ittiin cunqursuu fi ukkaamsuu irra kan oolfamu tahuu Mootummootnii fi haawasni addunyaa hubatanii gargaarsa bajataa godhaafii jiran akka dhaabanii fi mirga, ummatootaa, dirmokraasii fi namoomaa akka kabajuuf dhiibaa barbaachisu akka irratti godhan ABO irra deebi’ee waamicha isaa dabarsaaf.
Muddee 31, 2012
This entry was posted in ⇒ Politics: Oromo, Featured, News. Bookmark the permalink.	16 thoughts on “Dhaamsa Waggaa Haaraa ABO”	Guduru Torba says:	December 31, 2012 at 3:58 am	Tokkummaan humnaf, humni bilisummaaf lubbuukoon wareega. Baga bara 2013 geessan.
Reply	dhugassa baale says:	December 31, 2012 at 5:16 am	Waggaa deerra durra namoonni adunya kun hunddi kan dullaa turaniin eboo(warrana n lollaa turan amaas wanteef gachnaan haraa adnyaan san birra kutee mana keessa taa alatii bakka dinii jiru argan wari hanga araallee akka balla akkasumatti issn maskna jedhu Oromo sh gumitiifi qc qoffa yaa jarana duudanii nulle hinduchina blisumma barbaane sabbaafii sablimii wajjin jirrane murteessaan issin nutti hin fakkaatu issin kan itti jirttan sirba gidditi sirbi giddi mormma nama jalissa kanfuu kayoon teessan ganddan hangoo biyya sanii irrattii bahuu turre kuni amaafi issin harkka fashale anga toftta birra isnii gadi dhufuu gamma oromoo deebiaa wallin mariadha
Reply	Waliigalan alaa galu says:	December 31, 2012 at 5:43 am	Jabaadhaa. Issindukaa jiraa. Tokuman keenya bilisumaaf murteesaadha.
Reply	Dooyyo says:	December 31, 2012 at 6:17 am	Obbleeyyan keenya,galata argadhaa.Waaqni tokko isin godhe lammata adda isin hin baasin.Ergaan keessan damma.tokkummaan keessan nuuf nadhii dha.bara itti aanu kana kan milkii taasisuuf haa carraaqnu.
Reply	mohammedkhazali says:	December 31, 2012 at 11:40 am	Nutii baratootni oromoo universiiti bahirdar waalitii dhufuun guyyaa WBO halaa gariin kabajanee ibsaa ejjaannöo kan tarkaanfílee garagaraa of jala qabu bafanee wa’adaan akka bara hara kana kessati bilisumaa kenyaaf har’aa boru oso hin ja’iin galmaan gahuuf kutaanera.Lukkeeleen diina kan dina waajjíin nuti dulus tarkaanfii isaa barbaachisu irraati akka fudhaanu, moraa QBO gabiisuf of dubaa hin debinuu Orömia shall be free.
Reply	Obsaa laamii says:	December 31, 2012 at 2:51 pm	Yeroo hundaa wagaa hara’aa irratii waan hara’aa gadii batuu garuu itti hojjatinnii hin arkinee mee baraa kanaa Oromo sobuu dhisaa waan tokko waan jabaa dalgaa tii umaanii Oromo 100% isiin dukaa dhabataa ….
Reply	YD says:	December 31, 2012 at 8:47 pm	Rabbi hinraaftu QC/shanee or Shanee/QC. Duubiin homa moti keessa nutolchii
Reply	Fayyaaleessa says:	December 31, 2012 at 9:54 pm	Akkuma jedhamu, tokkummaan humna. Tokkummaan dhaamsa kana nuuf dabarsuun keessaan saba Oromoo fi ilmaan isaa kan walabummaa Oromiyaa hawwanii abdii tokko. Tokkummaan yoo jiraate fi tokkummaa yoo hojatame diina keessaaa fi diina alaallee mooyatuun salphaa dha. Bilisummaaniis daddafiin dhufa. Akka nam-tokkotti murnootni ABO tokko ta’uun guddisee na gammachiisee jira. Sabni Oromoo fi ilmaan isaa amma kan isin irraa eegan waraqaa maxansuu duwwaa osoo hin taane, hooggana tokko uumuu dha. Murteessaa fi amansiisaan daddafiidhaan walabummaa Oromoo fiduu fi dhugoomsuu yoo ABO hooggana tokko qabaatee dha. Kana akka yeroo gabaabaa keessatti saba Oromoo fi ilmaan isaa beeksiftan hawwii kiyya.
Xiinxalaan isin xalayaa kana keessatti gootan bilchaataa dha. Waaqnis kan nama gargaaru yoo abbaan of gargaare jedhu. Kanaaf, nuy akka ilmaan abbaa tokkotti, akka Oromoottii fi akka lammii Oromootti of gargaare Rabbiis nu gargaara. Jabaadhaa. Rabbi isin wajjiin haa jiraatu.
Reply	Beekerani Baratis says:	December 31, 2012 at 10:54 pm	Baga geessan jechaa yaadi koo;1,akkuma maqaasaa tokkummaan dhaabbilee Oromoo ofitti hammatnaan 2,akkan shakkuu fi sodaa ani qabuutti uummata Oromoo amantiilee gara garaa qabaatee walduukaa dhiitamaa jiru hundaan deggeramtani humna horachuun ala sochii musliimaa kan kanneen amantii biraa geggeessan hubbachiisuun yeroo dheeraa gaafattu akka dubbii ijootti kaasu yoo dhiistani akka milkooftan shakkii hin qabu.kaayyoo qulqulluun walabummaa Oromiaf qabsaa’amee Oromia independent taate gaafa argamtu furtuu waan hundaa ta’uun walqixummaa amantii fiduun waan ulfaatu miti.wanni wareega qaalii gaafatuu fi cunqurfamtoota hunda hirmaachiftu qabsoo garbummaa habashaa baradheeraa kana jalaa ba’uu akka ta’e isin caalaa hin beeku.
Reply	QANNOO says:	January 1, 2013 at 12:28 am	SG ABO fi QC ibisa wagga haara waliin baasuun nama gammachiissa!!Haata’u garu akka ibisa kana irra mulatuututi dhaabii kun hoggana tokko jalati waan ijjarame hinfakaatu.Osoo ijjarameera ta’e maqaan hayyu duree ABO dhumma irrati ibisamu qaba ture.Ammas walii galteen kuni hoggana tokko jalati ijjaaramee hin socho’u taanan bu’a fidu hin qabu.Kanaafiis qaamii lamaanuu hatataman filmaata walaba ta’e geggessani hayyu duree jabaa fi hogganttoota dhaaba biroo filachuu qabu.Filmaata kana irrati illee osoo dhaloota haara gara hogganumaatii fidanii gaariidhn jedha
Reply	obsaa says:	January 1, 2013 at 2:42 am	Duraan dursee ABO QC fi ABO Shaneen walinn hojjechuu eegaluu keessaniif galatooma. Waggaa darbe keessa rakkoo guddaa tokko hiiktanii jirtu. Bara 2013 keessa tokkummaan qabsaa’ota oromoofi tokkummaan ummata Oromoo kan dur caalaa jabaatee akka ittifufuuf tokkoon tokkoon oromoo cimsee akka irratti hojjechuu qabu dhaamsa dabarfachuun fedha. Tokkummaa Oromoo dadhabssisuuf kan hojjetan jaarmiyaalee Amaaraa fi jaarmiyaa Tigree ti. Keessumaayyuu jaarmiyaaleen Amaaraa warri akka Ginboot 7 toftaa adda addaatiin [fknf. karaa amantii, ispoortii, muuziqaa, kkf] Oromoota itti maxxanuun suuta suuta garee isaanii keessa galfachuu achumaanis tokkummaa keenya booressuuf hojjetu. Tokkummaa keenya jabeessuuf habashoota dhissuun/irraa fagaachuun / tarkaanfii isa jalqabaa ti. Gama qabsoo hidhannootinis taanaan bara haaraa kana keessa tooftaa dhokataa babbaasnee ogummaa lolaa dargaggoota Oromoo heddumminaan barsiisuun nurraa eegama. Qawwee malee bilisummaa yaaduun hudduu malee surree uffachuu wajjin tokko.
Reply	Mortar says:	January 1, 2013 at 2:48 am	@Dhugassa Baale
Qabsaa’ota ABO irratti afaan kee haqachuu dhiisiitii dura qubee Afaan Oromoo baradhu. Isa booda jecha, hima, keeyyata, dubbisa baradhu. Isaan booda yaada kee kenni.
Reply	wt says:	January 1, 2013 at 5:47 am	shane fi qc maaliif dhaaba wali malateessan gurmu qabsawota jedhamu maaf dhiis? walii galteen jara kana kijibaa ta’u hubadhaa………….ani tokko bulee ijji……..nabulte jetti oromoon
Reply	obsa tolera says:	January 1, 2013 at 9:54 am	Baga geesan
Barri kuni kan nagaa,bilisumma ,araraa, jalalaa ,tokkumma nuuf haa ta’u.
Reply	Gammadaa says:	January 1, 2013 at 3:39 pm	Moortar, galatoomi.
joonjoftuu baale of jette san baga itti danqarte.
Reply	Hawwinee Barii says:	January 2, 2013 at 2:24 am	Baga ganna haaressa nagaan geessan. Ibsi ganna haaressaa ABO’n bahe tokkummaan uumame hojiitti akka fasaramaa jiru kan garsiisu waan ta’eef kan guddoo nama gammachiisuu dha. Xinxalli isaan godhan illee akkasuma hagam haala biyya keessaa akka isaan akka gaariitti hordofaa jiran garsiisa. Kun bilchina jaarmaa Oromoo kan garsiisuu dha.
Amajjiin tokko, guyyaa itti Oromoon qabsoon hidhannoon Oromiyaa bilisoomsuuf waada itti seene haaromfatu qofa osoo hin taane, qabsoo hidhannoo ABO’n geggeeffamu daranuu jabeessuuf wareegama kaffalamuu dachaa taasisuuf guyyaa itti waadaa seennuu dha.
← VOA Interview with ODF's Lencho Bati & OLF's Boruu Barraaqaa on Current Oromo Political Affairs	Seattle (Washington): Afeerraa Kabajaa Ayyaana Guyyaa WBO – Amajjii (January) 12, 2013 →
Recent Posts	Ji'a Ammajjii fi Guyyaa WBO!
Amajjiin 1, Guyyaan WBO, Ayerlaanditti Haal Oo’aadhaan Kabajame
License to Criticize the Oromo Struggle
Akeeka WMO (ODF) fi Akeeka Impaayera Itiyophiya
Dhaamsa Guyyaa Yaadanno WBO fi Bara 2013 Simachuu
Recent Comments	melaku girma on Qeerroo – Gumaacha Artis…MURTI on Hinafu Sibiraa, WalalooSooressaa on Baga Geeysan Seensa Bara Haara…Surraa on Amajjii 5, 2013: Ayyaana Guyya…Migiroo on Gadaa.com's PERSONS OF TH…	Archives	January 2013
Categories	⇒ Activism & Advocacy
⇒ Culture, History and Language
⇒ Education, Science & Tech
⇒ Entertainment & the Arts
⇒ Fashion and Style
⇒ Horn of African Affairs
⇒ Human Rights & Refugees
⇒ Politics: Oromo
⇒ Regional Politics
⇒ Report Card
Isku-O Adam Harun
Nemera G Mamo
Toleeraa Fiqiruu Gamtaa